Fursadda shaqada: TETRA TECH waxay raadineysaa Agaasime / Maamule iyo Maaliyadeed (H / F) - TELES RELAY
ACCUEIL » Congo - Brazzaville - Fursadaha Shaqada • Shaqo bixinta »Job offer: TETRA TECH waxay raadineysaa Agaasime / Agaasime Maamuleed iyo Maaliyadeed (M / F)
Tixraaca Shaqada: TETRA TECH waxay raadineysaa Agaasime / Maamul Maamuleed iyo Maaliyadeed (M / F)
KALA DUWAN MAGANGALYO: MASUULIYE / MAS'UULKA IYO MAGANGELYADA (M / F)Waxaan raadineynaa a Agaasimaha / Agaasimaha Maamulka iyo Maaliyadda (M / F) oo loogu talagalay qandaraas horumarineed oo USAID ah oo loogu talagalay ilaalinta dhaqaalaha ee Jamhuuriyadda Congo.
Ujeedada mashruucan (taas oo ah muddo shan sano ah) waa in kobcitaanka ee meelaha kaabaha oo leh ujeeddooyin ilaalinta ee Republic of Congo oo keeni macaashka si toos ah ilaalinta ah ee meelaha la ilaaliyo iyo bulshada ku xeeran ee goobahaas.
Intaa waxa dheer, qandaraaskan wuxuu diiradda saari doonaa iskaashiga ka dhexeeya lamaanayaal badan oo ballaaran si loo kordhiyo helitaanka suuqa iyo bilawga dhaqdhaqaaqyada dhaqaalaha ee la xiriira beeraha iyo beeraha iyo fursadaha la jaanqaadaya maaraynta waarta ee kaynta iyo ilaha dhaqaalaha.
Wuxuu mas'uul ka yahay bixinta iyo bixinta waqtigii loogu talagalay dhammaan maaliyadaha, maamulka, fulinta, soo iibsiga, qandaraaska iyo taageerada ilaha aadanaha ee looga baahan yahay mashruuca. DAF waxay mas'uul ka tahay maareynta nidaamka xakamaynta xisaabinta iyo maaliyadda ee xafiiska mashruuca iyo in la dejiyo meelo ku haboon oo ku haboon kontaroolada gudaha si ay u hoggaansamaan heerarka guud ee xisaabinta. Khibrada buugaagta Quick Quick waa hanti.
HORUMARINTA HORUMARKA EEDEYSIGA: MASUULIYADDA / MAS'UULKA IYO MAS'UULKA (M / F)
Shahaadada Bachelor / Shahaadada Bachelor-ka ee mawduuc la xidhiidha mid ka mid ah maaddooyinka farsamada, Master macquul ah;
Waayo-aragnimo hoggaamineed oo farsamo oo leh heerar sare oo ka sarreeya mas'uuliyadda mashaariicda deeq-bixiyeyaasha oo la mid ah kakanaanta;
Waayo aragnimada qandaraaska ay maalgeliso USAID ayaa la door bidayaa;
Hogaaminta la aqoonsan yahay, xirfadaha ururinta iyo qorista;
Khibrad shaqo ee Jamhuuriyada Congo;
Aqoonta Microsoft Word, Excel iyo Powerpoint;
Aqoonta Faransiiska, aqoonta Ingiriisku waa hanti.
QIIMEYNTA LOOGU TALAGALINAYO: MASUULIYE / MASUULIYADDA MAS'UULKA IYO MAS'UULKA (M / F)
Waayo-aragnimada u dhaxeysa sanadaha 2 iyo sanadaha 5
Bac + 5 iyo wax ka badan
Wixii macluumaad dheeraad ah: https://www.emploi.cg/offre-emploi-congo-brazzaville/directricedirecteur-administratif-financier-h-f-477318
DIB U LEEYIHIIN 20 DADKA DHALINYARADA DHALINYARADA
Shaqo bixinta: Nexcom Consulting waxay raadineysaa laba (2) Sahanka Cilmi-baarista & Fikradaha Is-bahaysiga (H / F).